I-Single Apartment enekhishi eliseduze ne-Isar - I-Airbnb
I-Single Apartment enekhishi eliseduze ne-Isar
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Living Hotel Prinzessin Elisabeth
Ukuhlala endaweni ekahle futhi ethule: amafulethi ethu angawodwa anekhishi elinempahla, indawo yokuhlala, indawo yokudlela neyokulala nendawo yehhovisi lasekhaya (i-wifi yamahhala) atholakala phakathi nendawo eyisakhiwo sodumo iGlockenbachviertel, ngqo ku-Isarhochufer Ideal enhle yokugijima noma. ukuhamba, ilungele ukusebenza, ilungele ukuzijabulisa. Futhi kuhle futhi kuhlakaniphile kulabo abafuna ukuhlala isikhathi eside futhi bazizwe besekhaya kancane noma bekude.
+ cishe sqm ifulethi elilodwa: ilanga,
linethezekile, line-air-conditioned + Ukulala, ukusebenza, indawo yokuhlala nokulala kuhlangene
+ Ukukhanya okuningi emini, isikhala kanye nendawo yokugcina izingubo zokugqoka
+ Ikhishi elinakho konke: isitofu, i-microwave, ifriji kanye nemishini ebanzi yasekhishini: amabhodwe, izitsha, izinto zokudlela, i-pasta strainer, iketela, insipho yokugeza izitsha, njll.
+ Umbhede olala umuntu oyedwa (1.00m x 2.00m)
+ Amakhethini amnyama nesikrini
esicaba + Imishini ekahle yehhovisi lasekhaya ene-wifi yamahhala enejubane eliphezulu kanye nemishini yokupha enezimbobo, ama-hubs njll.
+ Ukuhlanza kwamaviki onke kuhlanganisa ilineni yombhede
+ Inani lokuhlanza lokugcina EUR
60,00 +Ukuphepha kuza kuqala: indlu isebenzisa inhlanzeko ehlakaniphile futhi
umqondo wokuphepha wazo zonke izivakashi nabahlali emafulethini nasezindaweni zomphakathi
+ Ngenxa ye-Coronavirus (COVID-19), sicela uqinisekise ukuthi ubhukha futhi uhlala kuphela
kule ndawo yokuhlala kulandela imihlahlandlela yakamuva kahulumeni wendawo
Lapha ungathola iMunich njengokuhamba phambili kwayo! Inhloko-dolobha yaseBavaria idolobha elinezinga eliphezulu lempilo eJalimane. Futhi amafulethi e-Isar nase-Glockenbachviertel aphakathi kwezindawo ezifunwa kakhulu zokuhlala ezishisayo ngaphakathi kweMunich. Ngoba lapha awukwazi nje ukugijima nokuhamba amakhilomitha amaningi. Lapha kunemibala egqamile, ephilayo, enempilo futhi kumnandi ngempela ukusebenza, ukuphila, ukugijima, ukuhambahamba noma ukuhamba nomngane wakho onemilenze emine. Izinja zamukelekile lapha.
Eduze kwehhotela le-Apartment kukhona iNockherberg, i-Prater ne-Weideninsel, i-Westermühlbach kanye ne-Rosengarten enhle kakhulu. Ebangeni lokuhamba futhi ngokufinyelela okuqondile kunoma yiziphi izitolo, izitolo, izitolo ezinkulu, izindawo zokucima ukoma nezindawo zokucima ukoma ezisemfashinini, emnyango wethu kune-Röcklplatz, enikeza isiko langempela lokupheka, i-Evergreen Cafe Szuzi, i-restaurant Fugazi ngesitayela se-Bauhaus Ukudla kwaseMedithera kanye nebhuloho i-Wittelsbach ne-Reichenbach ne-Reichenbach Kiosk yalo edumile yamahora angu-24, lapho kuhlangana khona izikhova imini yonke noma nini.
Ibungazwe ngu-Living Hotel Prinzessin Elisabeth
Bheka phambili ububele nokungenisa izihambi kwaseBavaria: Sinikeza konke ukuze uzizwe ukhululekile ngokuphelele nathi. Ingabe unombuzo? Vele uxhumane nathi. Sizokujabulela ukukusiza. Ngamathiphu wangempela wangaphakathi, kodwa futhi kuzo zonke ezinye izindawo. Futhi uma uke waba nesithukuthezi ekamelweni lakho, vele uhlale phansi endaweni yokwamukela izivakashi futhi uhlangane nezinye izivakashi
Bheka phambili ububele nokungenisa izihambi kwaseBavaria: Sinikeza konke ukuze uzizwe ukhululekile ngokuphelele nathi. Ingabe unombuzo? Vele uxhumane nathi. Sizokujabulela ukukusiz…